Akụkọ - Enwere ike ịjupụta iko mmiri silicone na mmiri esi mmiri?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ, otu iko mmiri nke silica gel nwere ike ijide mmiri sie?
Azịza ya bụ: n'ezie enwere ike jupụta na mmiri esi.A na-eji gel silica organic na-emetụta gburugburu ebe obibi karama mmiri silicone.Okpomọkụ na-eguzogide -40-220 degrees, inogide na ọ dịghị mgbe oruru.Enwere ike ịpịaji n'ime akpa maka ojiji!
A na-eji silicone mmiri mmiri + plastik PP mee karama mmiri nke nri na enweghị BPA (bisphenol A).A na-eme ngwaahịa a nke silicone-ọkwa nri, nke dị mma na nke na-adịghị egbu egbu, yana otu ihe ahụ dị ka ihe mgbochi nwa.
Isi ísì dị iche iche na-ahapụ n'ime iko iko bụ n'ihi na n'oge mmepụta ihe, a na-ahapụ silica gel mgbe emechara ya na okpomọkụ dị elu na oven, a na-ebugakwa ngwaahịa ahụ ozugbo na onye na-azụ ya site na ahịrị mmepụta.
A na-atụ aro ka ịsacha ya na ncha tupu ejiri ya, wee sie ya n'ime ite maka nkeji 6-7 iji kpochapụ ma wepụ isi ísì.Enwere ike apịaji n'ogo ma nwee nko.
Njirimara ngwaahịa silicon:
Ngwa sitere na 100% silica gel na-emekọrịta ihe na gburugburu ebe obibi: Nri silica gel bụ ihe inorganic polymer colloidal kpụrụ site na polycondensation nke silicic acid, na akụkụ ya bụ mSiO2nH2O.Ọ nwere ezigbo nkwụsi ike kemịkalụ, ma e wezụga maka caustic alkali na hydrofluoric acid, ọ naghị emeghachi omume na acid ọ bụla ma ọ bụ alkali n'okpuru ọnọdụ abụọ pụrụ iche.A na-ejikarị ya na ngwaahịa nwere ihe nchekwa dị elu dị ka ihe mkpuchi nwa na karama nri.
Ndị na-adịghị egbu egbu na enweghị ụtọ: Ihe ndị a na-emepụta bụ silicon dioxide na mmiri, nke dị mma ma kwụsie ike.
High okpomọkụ na ala okpomọkụ na-eguzogide: The okpomọkụ na-eguzogide nso nke silica gel akụrụngwa bụ -40 ℃-220 ℃, nke dị nnọọ karịa nke nri plastic ngwaahịa, na ọ dịghị agbaze n'elu 100 ℃.Usoro eji eme ihe dị mma, ọbụlagodi mgbe ọkụ na-ere ya, ọ ga-abụ naanị na ọ na-agbaze n'ime silicon dioxide na vapor mmiri, nke na-adịghị egbu egbu na adịghị emerụ ahụ.
Nguzogide ịka nká na enweghị ike ịnwụ: Okpomọkụ ikuku oxidation dị elu karịa nke ngwaahịa rọba yiri ya.Ọ naghị ada ada n'okpuru okpomọkụ kwa ụbọchị ma nwee ndụ ọrụ ruo afọ 10.
Ọ dị mfe ihicha, na-eguzogide mmanụ na mmiri, enwere ike ihicha ya na igwe efere.Ọ dị mfe iji ma bụrụ ezigbo onye inyeaka maka ndị nwunye ụlọ.
Dị nro, na-adịghị mma, na-enwe mmetụta dị mma, dị ka akpụkpọ anụ nwa, na-ekpo ọkụ ma na-echebara echiche.Nhọrọ ihe, usoro nhazi, njikwa mma: Nhọrọ ihe a bụ nke ọma dịka ọkọlọtọ US FDA maka gel silica-ọkwa nri.